လူပွောမြားနတေဲ့ အလှဆုံးဝတျစားပွီး တရားရုံးမှာ ကှာရှငျးခဲ့တဲ့ အမြိုးသမီးဟာ စဈတပျနဲ့ ဆကျနှယျနသေူဖွဈတယျဆိုတဲ့ စှပျစှဲခကျြ ကိုဖွရှေငျးလာခဲ့တဲ့ ညီမဖွဈသူ – Shwe Likes
မနကေ့ ဒီဇငျ ဘာလ (၂၈) ရကျနေ့ မှာေ တာ့ မန်တလေးမွို့က အမြိုး သမီးတဈေ ယာကျဟာ အလှဆုံးဝတျ စားပွငျဆ ငျပွီး တရားရုံး မှာကှာရှငျးလကျမှ တျထိုးခဲ့တဲ့ ဓာတျ ပုံတှဟော ဖစျေ့ဘု တျစာမကျြနှာ မှာ ပြံ့နှံ့လာခဲ့ပါတယျ။
အဆိုပါအ မြိုးသမီးဟာ သီရိသုဓမ်မသိင်ျဂီဘှဲ့ရပွီး စဈတပျနဲ့ ဆကျနှယျနသေူတ ဈဦးဆို ပွီး ဝဖေနျမှုေ တှမြားပွားလာခဲ့ပွီး အဆိုကိစ်စနဲ့ပကျသတျပွီး ကာယကံရှငျအ မြိုးသမီးရဲ့ ညီမဖွဈသူက အခုလိုပဲဖွရှေငျးပေးလာခဲ့ပါတယျ။
“ကြှနျမအ ဈမနာမညျက မသီရိ ခြိုပါရှငျ!! သီရိသုဓမ်မ သိင်ျဂီ မဟုတျရ ပါဘူး။ ဘယျဘှဲ့မှလဲ မယူဖူးပါဘူး ဘယျဘောမှလဲ မမရပါဘူး! ဒီနေ့ ဝတျစားဆ ငျယငျတာကလဲ သူဘယျလိုေ နတယျ ဝတျတတျ တယျဆိုတာ မန်တေ လးတဈမွို့လုံးသိပါတယျ။ အိမျခွံမွေ အကြိုးဆောငျ ကုမ်ပ ဏီလုပျတဲ့ အပျေါမှာ လူသိ မြားပမေယျ့ ခရိုနီလဲ မဟုတျ ဘယျသူနဲ့မှလဲ ပေါငျးမစားဖူးပါဘူး။
မဟုတျတဲ့သတငျးတှနေဲ့ ယုတျမာပွီး အောကျတနျးမကကြွပါနဲ့နျော။ အမြိုးသမီးတဈယောကျ ဒီလိုလကျမထောငျပီးနနေိုငျဖို့ဆိုတာ ကိုယျဆိုရငျရောဆိုတဲ့ ကိုယျခငျြးစာစိတျနဲ့တှေးကွညျ့ပါ။”
“ဒီခတျေမှာ ငှရှေိတဲ့သူ တိုငျးကို ဘောမဆိုပီး ရိုကျခြိုး ဖကျြစီးခငျြ တဲ့သူတှရေဲ့ အောကျတနျးကြ တဲ့စိတျဓါတျကိုလဲ အံ့ဩမိတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ ကိုယျ့ရဲ့မဟု တျမှနျတဲ့သတ ငျးကွောငျ့ သူတပါးအသကျ အိုးအိမျထိခိုကျ နိုငျတာကိုသိရ ကျနဲ့ဖှရငျတော့ အရမျးကိုလူမ ဆနျတဲ့လုပျရပျပါပဲ။
တိုငျးပွညျ မအေးခြ မျးနတေဲ့အခြိနျမှာ ကြှနျမအဈမ မှာလဲ သူ့အိမျထောငျနဲ့ပူဆှေးသော ကရောကျ ခဲ့ရတာ2နှဈနီးပါးရှိပါပွီ။ အခုမှ သူ့ဘဝ အေးခမျြး သှားလို့ ဒီလိုစိတျထားနိုငျတာ ဒီအခွအေေ နရောကျအောငျ သူဘယျလောကျကွိုးစားခဲ့ရလဲ ကိုယျတှအေ သိဆုံးပါ။ နောကျပွီး ခမျြးသာတိုငျးဘော မမဟုတျတာ ကို ဘယျလိုရှငျးပွရမယျေ တာ့မသိပါဘူး ရှငျ။
ဘော မ မပဲလဲ ရိုးသားစှာရှာဖှပွေီး အောငျမွငျစှာရပျ တညျနတေဲ့ အမြိုးသမီးကော ငျးတှလေဲ မွနျမာပွညျမှာ အမြားကွီးရှိ ပါတယျလို့!! (နိုငျငံရေးတော့ထညျ့ မပွောတော့ ဘူးရှငျ့ ကမြတို့အဲ့ေ လာကျ မအဘူး)”ဆိုပွီး ဖွရှေငျးပေး လာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ Source: Thida Myint ‘s fb
မနေ့က ဒီဇင် ဘာလ (၂၈) ရက်နေ့ မှာေ တာ့ မန္တလေးမြို့က အမျိုး သမီးတစ်ေ ယာက်ဟာ အလှဆုံးဝတ် စားပြင်ဆ င်ပြီး တရားရုံး မှာကွာရှင်းလက်မှ တ်ထိုးခဲ့တဲ့ ဓာတ် ပုံတွေဟာ ဖေ့စ်ဘု တ်စာမျက်နှာ မှာ ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါအ မျိုးသမီးဟာ သီရိသုဓမ္မသိင်္ဂီဘွဲ့ရပြီး စစ်တပ်နဲ့ ဆက်နွယ်နေသူတ စ်ဦးဆို ပြီး ဝေဖန်မှုေ တွများပြားလာခဲ့ပြီး အဆိုကိစ္စနဲ့ပက်သတ်ပြီး ကာယကံရှင်အ မျိုးသမီးရဲ့ ညီမဖြစ်သူက အခုလိုပဲဖြေရှင်းပေးလာခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်မအ စ်မနာမည်က မသီရိ ချိုပါရှင်!! သီရိသုဓမ္မ သိင်္ဂီ မဟုတ်ရ ပါဘူး။ ဘယ်ဘွဲ့မှလဲ မယူဖူးပါဘူး ဘယ်ဘောမှလဲ မမရပါဘူး! ဒီနေ့ ဝတ်စားဆ င်ယင်တာကလဲ သူဘယ်လိုေ နတယ် ဝတ်တတ် တယ်ဆိုတာ မန္တေ လးတစ်မြို့လုံးသိပါတယ်။ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပ ဏီလုပ်တဲ့ အပေါ်မှာ လူသိ များပေမယ့် ခရိုနီလဲ မဟုတ် ဘယ်သူနဲ့မှလဲ ပေါင်းမစားဖူးပါဘူး။
မဟုတ်တဲ့သတင်းတွေနဲ့ ယုတ်မာပြီး အောက်တန်းမကျကြပါနဲ့နော်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဒီလိုလက်မထောင်ပီးနေနိုင်ဖို့ဆိုတာ ကိုယ်ဆိုရင်ရောဆိုတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့တွေးကြည့်ပါ။”
“ဒီခေတ်မှာ ငွေရှိတဲ့သူ တိုင်းကို ဘောမဆိုပီး ရိုက်ချိုး ဖျက်စီးချင် တဲ့သူတွေရဲ့ အောက်တန်းကျ တဲ့စိတ်ဓါတ်ကိုလဲ အံ့ဩမိတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့မဟု တ်မှန်တဲ့သတ င်းကြောင့် သူတပါးအသက် အိုးအိမ်ထိခိုက် နိုင်တာကိုသိရ က်နဲ့ဖွရင်တော့ အရမ်းကိုလူမ ဆန်တဲ့လုပ်ရပ်ပါပဲ။
တိုင်းပြည် မအေးချ မ်းနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မအစ်မ မှာလဲ သူ့အိမ်ထောင်နဲ့ပူဆွေးသော ကရောက် ခဲ့ရတာ2နှစ်နီးပါးရှိပါပြီ။ အခုမှ သူ့ဘဝ အေးချမ်း သွားလို့ ဒီလိုစိတ်ထားနိုင်တာ ဒီအခြေအေ နရောက်အောင် သူဘယ်လောက်ကြိုးစားခဲ့ရလဲ ကိုယ်တွေအ သိဆုံးပါ။ နောက်ပြီး ချမ်းသာတိုင်းဘော မမဟုတ်တာ ကို ဘယ်လိုရှင်းပြရမယ်ေ တာ့မသိပါဘူး ရှင်။
ဘော မ မပဲလဲ ရိုးသားစွာရှာဖွေပြီး အောင်မြင်စွာရပ် တည်နေတဲ့ အမျိုးသမီးကော င်းတွေလဲ မြန်မာပြည်မှာ အများကြီးရှိ ပါတယ်လို့!! (နိုင်ငံရေးတော့ထည့် မပြောတော့ ဘူးရှင့် ကျမတို့အဲ့ေ လာက် မအဘူး)”ဆိုပြီး ဖြေရှင်းပေး လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Source: Thida Myint ‘s fb